NAS4Free 11: Yako Yakavhurika Sosi Kuchengetedza NAS | Linux Vakapindwa muropa
NAS4Mahara 11 Iyo sisitimu inoenderana neBSD yekumisikidza yekuchengetedza system kana Kuchengetedza (NAS). Zvakafanana neFreeNAS, kana iwe uchizviziva, zvinokutendera iwe kuti uve nehurongwa hwekushandisa iyo ine yakapusa webhu interface inogona kugadzirirwa kuve nechengetedzeka uye inoshanduka netiweki yekuchengetedza sisitimu. Inogona kuiswa pane chero komputa yatinoda kukumikidza kune izvi zvinangwa uye nekudaro tinogara zvedu yakavanzika "gore" uye data rinowanikwa kubva chero kupi.
Kune avo vasingazive chii a NAS (Network-yakasungirirwa Kuchengetedza), Haifanire kuvhiringidzwa netekinoroji yeNAS (Network Access Server), nekuti izvi zvinoenderana nenzvimbo yekupinda kunetiweki yevashandisi, nepo NAS ichinongedzera kuSystem system inoreva tekinoroji yekuchengetera yevashandisi. Share nevatengi vari kure. Iwe unogona kuve neyamwe kana anopfuura akaomarara madhiraivha akatsaurirwa kuchinangwa ichi kumba uye neinternet kubatana tendera iyo data yauinayo kuti iwanikwe kubva kune smartphone, piritsi kana chero chero PC kubva chero kupi pasi.
Ndokunge, neNAS4Free uye nehurongwa hwakafanana tinogona kuva nerudzi rwe rakavanzika uye rakachengeteka gore nezvezvinangwa zvedu. SaFreeNAS, NAS4Free zvakare yakavakirwa paFreeBSD inoshanda sisitimu, iyo yatatotaura nezvayo kakawanda. Kunyanya, iyi vhezheni vhezheni inoshandisa vhezheni 11.0 sehwaro. Hutsva mashandiro akawedzerwa uye mamwe madhiragi akagadziriswa, pamusoro pekuve nekukanganisa usability zvishoma zvishoma. Inosanganisira kuenderana ne64-bit zvishandiso uye zvekare ye32-bit zvishandiso.
Su WEBGUI Izvo zvakafanana chaizvo nemakwikwi, uye zvinokudzivirira iwe kuti utarisane nemirairo, ichirerutsa kwazvo kumisikidza uye kuongorora. Kana iwe ukashinga kuikanda kubva paiyo peji repamutemo peji, unogona kuiisa pakombuta yako kuti uve neNAS chaiyo. Ichakumbira zita rezita uye password, izvo nekutadza kuri arun y nas4free zvichiteerana. Zviripachena unofanira kuzvishandura kana iwe uchinge wawana iyo webhu interface, nekuti izvi hazvina kuchengetedzeka uye unenge uchipa mukana wekuwana data rako kune vechitatu mapato.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » NAS4Free 11: Yako Yakavhurika Sosi Kuchengetedza NAS
Inotaridzika kunge inonakidza kwazvo ini ndiri kuzoyedza.
Chandaona chakanaka ndechekuti paFreeNAS Saiti ivo vanoita maVs http://www.freenas.org/freenas-vs-nas4free/ Kufamba kwakasvibisa kushora makwikwi kana kutya kwekupedzisira kwekurasikirwa nechimwe cheiyo pie? Zvinoita kunge sosi yakaderera kwazvo kuzviita.
Hazvingave zvakaipa kugara uchiisa chinongedzo.
Maitiro ekuvandudza kubva Fedora 24 kusvika Fedora 25